Wyndham Hotels & Resorts no nanondro toerana tsara indrindra hiasana ho an'ny fitoviana LGBTQ
Home » LGBTQ » Wyndham Hotels & Resorts no nanondro toerana tsara indrindra hiasana ho an'ny fitoviana LGBTQ
Ny Zon'olombelona miaro ny zon'olombelona dia mampiasa mason-tsivana mifototra amin'ny tombony mitovy amin'ny mpiasa LGBTQ sy ny fianakaviany; politika tsy fanavakavahana manerana ireo orinasa; manohana kolontsaina mampiditra; ary andraikitra ara-tsosialy orinasa
Nanambara i Wyndham Hotels & Resorts androany fa nahazo isa 100 tonga lafatra izy tamin'ny 2021 Corporate Equality Index (CEI), fanadihadiana nasionaly ary tatitra momba ny fanao mifandraika amin'ny fitoviana eo amin'ny toeram-piasana LGBTQ, tantanan'ny Fanentanana momba ny zon'olombelona. Ny voninahitra dia manamarika ny taona fahatelo nisesy nataon'i Wyndham nahazo isa tonga lafatra tamin'ny CEI, nanondro ny orinasa ho toerana tsara indrindra hiasana ho an'ny fitoviana LGBTQ.
“Ity fanekena ity dia manasongadina ny fanoloran-tenanay amin'ny fandraisana sy fitazonana mpiasa iray izay taratry ny fahasamihafan'ny vahininay, ny tompony ary ny vondrom-piarahamoninay manerantany. Manolo-tena izahay amin'ny famoronana kolontsaina miasa misy ny mpikambana ato amin'ny ekipanay afaka miroborobo, "hoy i Geoffrey A. Ballotti, tale jeneraly, Wyndham Hotels & Resorts. "Fantany fa ny fandraisana ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa dia miantso ny mpanjifa isan-karazany ny Wyndham Hotels & Resorts, mamboly tontolo iainana mandray azy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ankoatra ny fanohanana ireo mpikambana ao amin'ny ekipany."
Wyndham Hotels & Resorts dia iray amin'ireo orinasa 1,142 isa isa tamin'ny tatitra tamin'ity taona ity. Ny Zon'Olombelona miaro ny zon'olombelona dia mampiasa fepetra mifototra amin'ny tombony mitovy amin'ny mpiasa LGBTQ sy ny fianakaviany; politika tsy fanavakavahana manerana ireo orinasa; manohana kolontsaina mampiditra; ary andraikitra ara-tsosialy orinasa. Ny CEI dia manome isa ireo mpampiasa izay manome fiarovana lehibe ho an'ny mpiasa amerikana 18 tapitrisa mahery ary 17 tapitrisa fanampiny any ivelany. Ny orinasa naoty ao amin'ny CEI dia misy ny orinasa Fortune miisa 500 lehibe indrindra amidy ampahibemaso, ny orinasa mpampanoa lalàna amerikana lohan'ny 200 voalohany (AmLaw 200), ary an-jatony ireo orinasa ampahibemaso sy ampahibemaso mitazona orinasa afovoany.
Ny fanoloran-tenan'i Wyndham hanohana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ dia hita taratra na ao anaty na ivelan'ny orinasa:
Ho fanohanana ny famolavolana tontolo misy olona iray izay ahitan'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay mahazo aina tena, dia nanao fanentanana izahay tamin'ny 21 Oktobra 2020-Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpisolo tena mba hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena momba ny mpisolo anarana sy ny fomba ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny ekipanay mamantatra ny tena raha tokony hisafidy izy ireo ataovy izany.
Tamin'ny taona 2019, Wyndham Hotels & Resorts dia nanatevin-daharana ny HRC Business Coalition for the Equality Act, vondrona misy mpampiasa amerikanina manohana ny lalàna momba ny fitoviana.
Wyndham dia manolotra karazana loharanom-pahalalana isan-karazany sy fampidirana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa sy ny fitarihana zokiolona, ​​ao anatin'izany ny Birao Mpanatanteraka andraikitra ara-tsosialy sy ny avonavona, vondrona orinasa iray.
Wyndham Hotels & Resorts dia miara-miasa amin'ny orinasa mitarika ao anatin'izany ny HRC, Chambre Commerce nasionalin'ny pelaka sy lesbiana ary ny International Gay & Lesbiana Travel Association.
Manamafy ny fitsipiky ny mpizahatany vahiny i Dubai
Nahazo isa ambony ny ARC ao amin'ny Fanondroana fitoviana 2021 momba ny fitoviana zon'olombelona